२२ वटा वाणिज्य बैंकले बनाए मर्जरमा जाने मानसिकता, यस्तो छ संकेत ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > २२ वटा वाणिज्य बैंकले बनाए मर्जरमा जाने मानसिकता, यस्तो छ संकेत !
२२ वटा वाणिज्य बैंकले बनाए मर्जरमा जाने मानसिकता, यस्तो छ संकेत !
काठमाडौं । बैङ्कहरुले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा बुझाएको प्रगति विवरणमा मर्जरमा कुनै प्रगति नभएको देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कसँग मर्जरका लागि हालसम्म भएका प्रगति विवरण १० दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्र बैङ्कमा प्रगति विवरण बुझाउने अधिकांश बैङ्कले मर्जर र प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मर्जर समिति गठन गरेको, समितिले मर्जरका लागि विभिन्न बैङ्कसँग छलफल गरिरहेको, मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र सञ्चालक समितिमा छलफल जारी छ भन्ने उल्लेख गरेका छन।
उनीहरुले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाम तोकेर मर्जर वा प्राप्तिका लागि ठोस प्रगति भएको विवरण बुझाएका छैनन ।
हालसम्म २२ वटा वाणिज्य बैङ्कले मर्जरमा जान तयार रहेको जानकारी केन्द्रीय बैङ्कलाई दिएका छन ।
मौद्रिक नीतिमा ‘फोर्स मर्जर’को व्यवस्था नगरिएपछि राष्ट्र बैङ्कले मर्जरका लागि हालसम्म भएका प्रगति विवरण मागेको थियो ।
मौद्रिक नीति आउनुअघि बैङ्कहरुले मर्जरमा जान तयार छौं भनेर मात्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अहिले प्रगति पनि खासै भएको छैन । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि ‘पठाउनका लागि मात्रै’ बैंकहरुले प्रगति विवरण पठाएका छ् ।
बैंकहरुको मर्जरमा जाने भित्रि इच्छा नभएको एक बैङ्करले बताए । राष्ट्र बैङ्कले मर्जरको नीति लिएपछि हट्ने ठाउँ नभएका कारण बैङ्कको चाहना नभए पनि मर्जरमा जान बाध्य भएका हुन ।
विश्व बैङ्कले समेत बैङ्कको लगानी क्षमता बलियो बनाउन भन्दै संख्या घटाएर १५ वटामा झार्न सुझाएको छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा विश्व बैङ्कले बैङ्कको वासलातको आकार मजबुत बनाउन पूँजी १६ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएको छ ।
२०७६ असोज ०३ गते प्रकाशित
२०७६ असोज ३ गते ०८:०४ मा प्रकाशित
भर्खरै निस्कियो प्रावि तह शिक्षकको यी चार जिल्लाका नतिजा
अण्डाको मुल्य ३० रुपैयाँ बढ्यो
बढ्दो डलरले पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सघाउन सकेन
२१% बोनस सेयर दिंदै गरेको कम्पनीको बुक क्लोजको यो मिति जानिराख्नोस् !
पुष्प ब्यबसायीले नै धोबीखोला किनारका फूल बिरुवा धमाधम काट्न थालेपछि(फोटोफिचर)
धादिङमा बुक बस सञ्चालन
सरकारले गर्यो आठ सहसचिवको सरुवा, को–कहाँ ?